မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီရန် ရည်မှန်းထားပြီး ဒေသတွင်းနိုင်ငံများကဲ့သို့ ? - Yangon Media Group
ရုပ်ရှင်လောကသားများအနေဖြင့် လက်ရှိရောက်နေသည့်နေရာတွင် တင်းတိမ်ကျေနပ်မှုမရှိ ဘဲ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်များကဲ့သို့ အဆင့်အတန်းမီအောင် ရည်မှန်းချက်ထားပြီး လတ်တလောကာလ၌ ဒေသတွင်းရှိ ရုပ်ရှင်လောကဖွံ့ဖြိုးနေသော နိုင်ငံများကဲ့သို့ ဖြစ်လာစေရန် ကြိုးစားကြဖို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ကြောင်းသိရသည်။ မတ် ၂၃ ရက်က ကျင်းပသည့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးအပ်ပွဲကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင် ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် တက်ရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့ ပြီး အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ယင်းကဲ့သို့ ထည့် သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်က”ရုပ်ရှင်လောကသားများအနေနဲ့လည်း လက်ရှိ ရောက်နေတဲ့နေရာမှာတင် တင်းတိမ်ကျေနပ်နေမှုမရှိဘဲ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်တွေနဲ့ အဆင့်အတန်းမီအောင် ရည်မှန်း ချက်ထားပြီး လတ်တလောကာ လမှာဒေသတွင်းရှိ ရုပ်ရှင်လောက ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ နိုင်ငံများလို ဖြစ်လာ အောင်ကြိုးစားကြဖို့ တိုက်တွန်း ချင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်အပါအဝင် ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွေကနေတစ်ဆင့် ကျွန်မတို့ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသားတွေရဲ့သမိုင်း၊ ယဉ် ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံ၊ စိတ်နေစိတ် ထာ ကျွန်မတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက် တွေကို ကမ္ဘာကသိအောင် နားလည် စာနာအောင် လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့် အရေးတွေ အများကြီးရှိနေတယ်ဆို တာကို မှတ်ထားစေချင်ပါတယ်”ဟု ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အနေဖြင့် ကမ္ဘာ တွင် ထင်ရှားကျော်ကြားနေသော အာရှနိုင်ငံများမှ ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားများကဲ့သို့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ၊ သမိုင်းအမွေအ နှစ်များကို ကမ္ဘာကစိတ်ဝင်စား၊ အလေးထားသော ရုပ်ရှင်ယဉ်ကျေး မှုတစ်ရပ်အဖြစ် ဖန်တီးစေချင် ကြောင်းကို ထပ်မံပြောခဲ့သည်။ ”ကျွန်မတို့ အာရှမှာ ကိုရီး ယား၊ ဂျပန်၊တရုတ်၊ အိန္ဒိယ ရုပ် ရှင်ဇာတ်ကားတွေက မိမိတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ တံဆိပ်ခတ်ထား ပြီး ကမ္ဘာမှာထင်ရှားကျော်ကြားနေ ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အနေနဲ့လည်း ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းအမွေအနှစ် တွေ အနုပညာအမွေအနှစ်တွေကို တစ်မူထူးခြားတဲ့ ရှုထောင့်ကဖော် ထုတ်ပြနိုင်ပြီး ကမ္ဘာကစိတ်ဝင် စားအလေးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ယဉ် ကျေးမှုတစ်ရပ်အဖြစ် တည်ဆောက် စေချင်ပါတယ်”ဟု နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။ ယင်းအပြင် နိုင်ငံတော်၏အ တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က မြန်မာ့ရုပ်ရှင် နယ်ပယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အ တွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ အတိုင်း အတာတစ်ခုအထိ ပံ့ပိုးမှုများပြု လုပ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက် လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
”မချမ်းသာသေးတဲ့အချိန် မှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ ငွေ ကြေးအရ ပံ့ပိုးမှုက အတိုင်းအတာ တစ်ခုပဲရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ် ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုနဲ့ရုပ်ရှင် လောကဟာ အတိုင်းအတာတစ် ခုအထိ အောင်မြင်မှုတွေ ပြန် လည်ရရှိလာတာကို တွေ့ရမှာဖြစ် ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေ နဲ့လည်း ရုပ်ရှင်လောကဖွံ့ဖြိုးဖို့အ တွက် ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုတွေ၊ရိုက် ကွင်းနေရာတွေ ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါ တယ်”ဟု ပြောသည်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဖေမြင့်ကလည်း ”နိုင်ငံခြားက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းက ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားလာရောက် ရိုက်ကူးတာ အားလုံးလည်းအသိဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းက ဒီလိုမျိုး ရိုက်ကူးဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ အခုတော့ ရိုက်ကူးဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ ဝိုင်းဝန်းပြီး ကူညီဆောင်ရွက်ပေး ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုရိုက်ကူးရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးတာ က နိုင်ငံခြားမို့လို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာရုပ်ရှင်လော ကသားများ မြန်မာရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကောင်းများပေါ်ထွက်လာအောင် ဆောင်ရွက်ကြမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့ အလားတူဒီ့ထက်မက ကျွန်တော်တို့ပိုပြီး တော့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ကျွန် တော်တို့အဆင်သင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ကျွန်တော် ပြောချင်ပါ တယ်”ဟု အမှာစကားပြောကြားရာ တွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန် တက္ကဆက်ပြည်နယ် ဓာတုဗေဒစက်ရုံတစ်ရုံ မီးလောင်မှုငြှိမ်းသတ်နေစဉ် မီးကြွင်းများမှ ထပ်?
'ဝ' ဒေသ မိုင်းမောမြို့ သိုလှောင်ရုံတစ်ခုတွင် ပြင်းထန်သည့် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်
ချန်ပီယံလိဂ်တွင် ဗိုလ်စွဲသည်နှင့် လီဗာပူးကို တားဆီး၍ ရတော့မည်မဟုတ်၊ အောင်မြင်သော အသင်းတစ??
ဘရိုနာကို အနိုင်ယူပြီး ဝယ်လ်တာဝိတ် ချန်ပီယံဘွဲ့ကို ပက်ကွီအိုဆက်ထိန်း၊ ကြိုးဝိုင်းအတွင်းေ